I-Recipe yokupheka i-jam bukhoma ukusuka e-feijoa ngaphandle kokupheka
Indlu yasekhaya Recipes Okunye Ukupheka kweebhanki ebusika Jam ebusika
Ilizwe lomhlaba wezityalo zaseTroijoa liyingxenye yasemzantsi yeMelika. Esi siqhamo sinotyebi kwi-iodine nangesinyithi, kwaye sikhona ne-complex vitamins. Ngako oko, i-feijoa inomdla kakhulu kumzimba kwaye iyanconywa ukuba ifake izicelo zeengxaki ezahlukeneyo zempilo, kwaye kubaluleke kakhulu ukukhusela umhlaza. Iipropati zayo ezixhamlayo ziqulethwe kwi-pulp kunye ne-peel. Basebenzisa iziqhamo ngeendlela ezahlukeneyo, kubandakanywa ngesimo sejam.
I-Recipe ngesithombe se-feijoa jam eyakhelwe ekhaya
I-recipe ye-jam evela e-feijoa ilula kwaye nanini na umfazi angayilungiselela ngaphandle komgudu omkhulu. Xa uthengisa iziqhamo kwijam e-feijoa, kufuneka ukhethe iziqhamo ezivuthiweyo ukuzenza ngendlela ye-jelly nombala omnandi. Ukuba, unesiqhamo esingafuthi, ungakhathazeki. Kukho nawuphi na, baya kufika ekhaya.
feijoa - 1 kg (izithelo ezivuthiweyo)
ushukela ogqithisiweyo - 1 kg
lemon - 0,5
amantongomane (ama-walnuts) - 0.5 iikomityi
Iziqhamo ze-feijoa zihlambulula kakuhle ngamanzi afudumeleyo, uze udlule ngamanzi abilayo. Gweba i-ponytails uze uthathe iziqhekeza ezine, ushiye isikhumba. Musa ukwahlula i-lemon kwi-peel. Iimpawu zamantongomane zingaphambi kwamanzi atshisayo, uze uzifake kwangaphambili.
Yonke inqununu yokudlula isilwanyana esikhulu, yongeza ushukela kwaye ushiye ixesha elithile kuze kuphele ukuphela.
Izimbiza zeglasi kufuneka zihlanjululwe, zihlanjwe ngamanzi abilayo, zicime. Dlulisa i-jam elungiselelwe phezu kweenqana, vala ngokuqinileyo ngamabhodlela kunye nesitolo kwiqrijini.
Ukuphulukisa iipropati zentshukumo zokuphila ezivela e-feijoa
Ukuxhamla kwe-jam eluhlaza ukusuka e-feijoa kukulondolozwa kuyo yonke into yokunambitheka kunye neepropati zonyango, kuba akufuneki ukupheka. IJam ingahanjiswa kwitafile, yongeza kwi-cereal, i-cottage cheese, i-pastries okanye i-jelly. Umxholo ophezulu we-iodine, i-acids ye-organic kunye noshukela yenza ukuba izalisekile kwaye iqhumise. Ngoko ke, ebusika, kuya kuxhasa ngokupheleleyo ukukhuseleka, ikakhulu kubantwana. Ukongezelela, phila i-jam evela e-feijoa ngeli xesha lonyaka unesiqhamo esitsha kwitafile yakho. Ukongezelela, inkqubo yokuzimelela ayiyi kufuna inkcitho yexesha kunye nomzamo. Ewe, inokuthengwa kwiivenkile, kodwa uyavuma ukuba yonke into elungiselelwe ngezandla zayo inomdla okhethekileyo kunye nokubonakala.
Izigulane ezijongene neengxaki ze-thyroid zidinga inani elikhulu le-iodine. Ngaloo ndlela kulandela ukuba i-feijoa i-jam eluhlaza ayinakulungiswa kuyo. Kufuneka kuqatshelwe ukuba inyama yesisu iyanceda kakhulu ekusebenzeni kwenkqubo yokutya, kwaye i-peel kunye ne-antioxidants inikeza impembelelo enkulu yokulwa nokuguga.
IJam evela kwi-currant emhlophe (Kiev)
IJam ukusuka kumantongomane
I-Cherry jam (Kiev)
I-Blueberry boom: iipespe zokupheka ezixhamlayo ze-blueberry jam
I-Parachute igxume kwisigxina
Indlela yokubeka iinjongo: iingcebiso ezivela kwiincwadi ezilungileyo kwi-self-development
Yenza ioli efunekayo kunye nokusetyenziswa kwayo
Iklabishi ihamba ngamakhowe
Idayisi yeeperesi kunye namabhereberri
Indlela yokufumana umntu ukuba asebenze emva kwakho
Impawu eziqhelekileyo zeempawu zezodiac
Isaladi yehlobo le squid
I-Callanetics: i-fat burning belly
Yintoni ebaluleke ngakumbi kunokuba i-calanetics okanye i-yoga?
Luhlobo luni lokubumba olufanelanayo nam?